100W Ụzọ Ịgba Ọhịa n'èzí China Manufacturer
Nkọwa:Ụzọ na-acha ọkụ n'okporo ụzọ,Led Road Light,Egwuregwu n'èzí
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ > 100W Ụzọ Ịgba Ọhịa n&#39;èzí
Ihe Nlereanya.: BB-LD-100W-S-DR
Ụzọ anyị na-aga n'okporo ụzọ na-abịa na ihe ntanetụ foto nke dusk-to-dawn nke na-achọ ìhè ihu igwe na ike ọkụ na / na-akpaghị aka. Echegbula onwe gị banyere Led Road Light ga-ekpo ọkụ nke ukwuu, Mee ka imepụta ọkụ ọkụ na-eme nke a n'èzí n'èzí Mkpa ọkụ na-adịwanye mma ma na-ekpetụ ọkụ. Ụzọ a 100W okporo ụzọ enye 13000 Lumens na 5000K ìhè White. Nke ahụ bụ ọrụ ọkụ arụmọrụ nke 130lm / w! Okirikiri elu oriọna ọkụ ọkụ, ọkụ na-enwu n'okporo ụzọ na- enweghị nchekwa ma ọ bụrụ na UV ma ọ bụ IR radiation.Our na- edu ụzọ nwere akwụkwọ afọ 5, kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla.
Ụzọ na-acha ọkụ n'okporo ụzọ Led Road Light Egwuregwu n'èzí Ụzọ kachasị elu okporo ụzọ Akwụsị na-enwu ọkụ n'okporo ámá Batrị ejiri ọkụ n'okporo ụzọ awara awara Mpị ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Ndị na-acha ọkụ ọkụ